သနပ်ခါးမေ: တစ်နှစ် သမီးလေး သနပ်ခါးမေ
တစ်နှစ် သမီးလေး သနပ်ခါးမေ
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:10 PM မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ
ဟုတ်ပါတယ်။ မြတ်ကြည်ရဲ့ သနပ်ခါးမေ ဘလော့လေး တစ်နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ စာဖတ်သူတွေရှိနေပေးလို့ မြတ်ကြည်ရဲ့ ဘလော့လေး ရပ်တည်နိုင်နေတာပါ။ ဘလော့လေးရှိတာဟာ မြတ်ကြည်ရဲ့ အသက်ရှည်ဆေး တစ်ခွက်ပါပဲ။ သေသွားရင် ဘလော့မှာ ဥစ္စာစောင့်များဖြစ်မလားပဲ။
ပို့စ်တက်တိုင်း အမြဲ အားပေးခဲ့တဲ့ စာဖတ်သူတွေရယ်၊ ဝင်ဝင်လာကြည့်ပေးတဲ့ ဘလော့ပေါ်က မောင်နှမတွေရယ်၊ မရောက်ဖြစ်တာကြာပေမယ့် အမြဲတမ်း ခင်ခင်မင်မင်ရှိတဲ့ မမကွန်ဆီက အစ်ကို အစ်မတွေ ရှိလို့ မြတ်ကြည်ရဲ့ ဘလော့လေး စည်ကားနေတာပါ။
ဘလော့လေး ရှိနေလို့ စာတွေ အများကြီး ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ခံစားချက်လေးတွေ၊ ဘဝ အတွေ့ အကြုံတွေ၊ စိတ် အာဟာရ ဖြစ်စေတဲ့ စာတွေ၊ ခရီးသွားဆောင်းပါး၊ ချက်နည်းပြုတ်နည်း၊ ပညာ၊ ဗဟုသုတ အများကြီးပဲ။
တကယ်ခင်ဖို့ကောင်းပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ စာဖတ်သူ ညီမလေးတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ အစ်မတွေနဲ့ တွေ့ခွင့် ဆုံခွင့်ရတယ်။ စကားတွေ အများကြီးပြောဖြစ်တယ်။ အပြင်မှာ မမြင်ဖူးပေမယ့် တကယ့် ညီ အစ်မ တွေလိုပဲ၊ gtalk မှာ နောက်လိုက်ပြောင်လိုက်နဲ့။ အကြံဉာဏ်တွေလည်း ပေးကြတယ်။
ဘလော့လေးကို တရှိုက်မတ်မတ် လာရောက်အားပေးဖတ်ရှုတဲ့ စာဖတ်သူတွေ၊
ဘလော့လေး မွေးကင်းစ အချိန်ကတည်းက ဖေးမ ကူညီလင့်ချိတ်ပေးခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂါ မောင်နှမတွေ၊
သနပ်ခါးမေ ဘလော့လေးကို ပိုလူသိလာအောင် အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့ ရွှေဗျူးတီးမှ အစ်မများ
ရဲရဲကြီး sponsor ပေးခဲ့တဲ့ အစ်မ မေနှင်းအေး (Avon Cosmetics) ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တစ်နှစ်ပြည့် အနေနဲ့ က လက်ဆောင် cosmetic package ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။
( Brand တစ်ခုစီမှာ အရောင်းရဆုံးဖြစ်နေတဲ့ best seller product ၃ မျိုး ကို ပေးသွားမှာပါ) ဒီတစ်ခေါက်လည်း အိမ်တိုင်ရာရောက်ပါပဲ။ Facebook fans ထဲက ရွေးပေးသွားမှာဆိုတော့ သနပ်ခါးမေ ကို အားပေးနေကျဆို Like လုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ :)
Deadline က လကုန်မှာပါ။ လကုန်ရင် လက်ဆောင်ဆုရမယ့်သူကို ကြေငြာပါမယ်။
ဒါက စာဖတ်သူတွေ အတွက် သီချင်းလေးပါ။ မြန်မာ စာတန်းထိုးကို ဖတ်ကြည့်ပါနော်။ အဓိပ္ပာယ် အရမ်းရှိတယ်။ :D သွားမပေါ်အောင်ပြုံးနိုင်ပါစေ။ :P
စာဖတ်သူ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။
Anonymous July 5, 2012 at 7:26 PM
ကြိုက်လွန်းလို့ မနက်ကတောင် သူငယ်ချင်းတွေကိုရှယ်မိသေးတယ်..။
မြတ်ကြည် July 5, 2012 at 7:29 PM
ကျေးကျေး မမပေါက်။ မမပေါက်က မြတ်ကြည်ဘလော့ရဲ့ ပထမဆုံး ကော်မန့်ပေးခဲ့တာ။ အခုလည်း ပထမဆုံးပဲ။ :)
Thandar Lwin July 5, 2012 at 7:42 PM
မြတ်ကြည် ရဲ့ သနပ်ခါးမေ လေး အဓွန့်ရှည် အောင်မြင်ပါစေ ။ ဒီဘလော့လေး လာ လာဖတ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ် လှ ချင်စိတ်ပိုလာတယ် ...:P
jewel July 5, 2012 at 7:50 PM
အရိပ် July 5, 2012 at 8:01 PM
Happy Birthday သနပ်ခါးမေ... ;)
မြသွေးနီ July 5, 2012 at 8:21 PM
အလှအပမြတ်နိုးတဲ့ ညီမလေးမြတ်ကြည်ရဲ့ ဘလော့ဂ်(၁)နှစ်ပြည့်မှသည် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် စာတွေအများကြီး ပျော်ရွှင်စွာ ရေးနိုင်ပါစေလို့...။
မေမြို့မိုး July 5, 2012 at 10:20 PM
အစ်မတောင်မှ တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီနော်.. ကျွန်တော်တောင် ရှစ်လ သားလေးပဲချိသေးတယ်..။
spa July 5, 2012 at 11:44 PM
:) happy par say chee chee
Moe Sett Pwint July 6, 2012 at 12:08 AM
Happy Birthday, sister ..... :P
Anonymous July 6, 2012 at 1:14 AM
မြတ်ကြည်ရေးမသမျှကို လိုက်ဖတ်နေတဲ့ မြတ်ကြည်ရဲ့
မြတ်ကြည်ပြောတဲ့ဆိုင်မှာ သတို့သမီးဝတ်စုံသွားအပ်မလို့ သြဂုတ်လ ကြရင် မြန်မာပြည်ကိုများပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် နိုဝင်ဘာလမှာ တို့မင်္ဂလာပွဲကို မြတ်ကြည်ကို ဖိတ်ချင်ပါတယ် နောက်ထပ်လက်တွဲဖော်ပဲတွေ့တွေ့ အရင်လက်တွဲဖော်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စုံတွဲဖိတ်ချင်ပါတယ် ညီမလေးရယ် ပျော်ရွင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ဆန်းစနေ၀န်း July 6, 2012 at 1:47 AM
happy birthday.......Thanakhar May!
နွေလ July 6, 2012 at 2:20 AM
ဂုဏ်ယူပါတယ် အစ်မရေ ...
မမှတ်ထားမိလို့ . . .
ဘယ်နေ့ တစ်နှစ်ပြည့်မယ် မသိဘူး
Blog Day သတ်မှတ်ရင် ကောင်းမလားလို့
puupuu July 6, 2012 at 2:32 AM
ချစ်သူငယ်ချင်း မြတ်ကြည်လဲ ဘလော့မှာ ပိုစ့်အသစ်
ချစ်စံအိမ် July 6, 2012 at 5:10 AM
Anonymous July 6, 2012 at 5:46 AM
အိနြေ္ဒရှင် မိန်းကလေး July 6, 2012 at 5:53 AM
အလှအပနဲ့ပတ်သက်လာရင် အားကိုးရတဲ့ :P မမမြတ်ကြည်ရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှတည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြင့် စာတွေရေးနိုင်ပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်နော် :)
Candy July 6, 2012 at 7:20 PM
တနှစ်တောင် ပြည့်သွားပြီလား.. ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ် သူငယ်ချင်း :D
Sweety Snow July 7, 2012 at 5:41 AM
ဘလော့တွေကို စဖတ်ဖြစ်တာ မြတ်ကြည်ရဲ့ဘလော့ဂ်ကနေ အစပြုခဲ့တယ်ဆိုတာ အမှတ်တရပို့စ်တစ်ပုဒ်လောက်တောင် ရေးဖို့စိတ်ကူးခဲ့သေးတယ် မအားတာနဲ့ မရေးဖြစ်သေးတာ. ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ :-**
AH July 7, 2012 at 7:06 AM
နှစ်ပေါင်းများစွာ... ဘလော့လေးနဲ့အတူ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေခင်ဗျာ... လှပစွာနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးကို အမြဲတမ်း အားပေးနေမှာပါ။ အဲ..ဥစ္စာစောင့်တော့ မဖြစ်လိုက်နဲ့နော်... ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်ထဲ ထည့်ရေးပစ်လိုက်မှာ ဟွင်း ဟွင်း ဟွင်း... :P
Anonymous July 7, 2012 at 9:03 AM
မြတ်ကြည်ရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်လေးကို ဂုဏ်ပြုရင်း ဘလော့လေးကို မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ညီမလေးကိုလဲ congraculation ပါလို့..ဒီထပ်မက စာတွေ ရေးနိုင်ပါစေ..
NSA July 7, 2012 at 11:03 PM
Happy Birthday ThanaKha May ...
Anonymous July 8, 2012 at 11:14 AM
လူတွေစည်တော့လည်းမြတ်ကြည်လေးအတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ သနပ်ခါးမေအဓွန့် ရှည်ပါစေလို့ ......
မဒမ်ကိုး July 9, 2012 at 6:01 AM
တစ်နှစ်သမီးလေး မြတ်ကြည်တစ်ယောက် ရှေ့ဆက်လို့ ပျော်ရွှင်မှု့တွေခညောင်းပြီး အသက်ရှည်သမျှ ဒီဘလော့ဂါဘ၀နဲ့ ထာဝရရပ်တည်နိုင်ပါစေသော်
မြတ်ကြည် July 9, 2012 at 6:20 AM
ဆုတောင်း အားပေးမှုတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။ ဒီထက်ပိုပြီး ကြိုးစားသွားပါမယ်။ :)
khin yamone July 19, 2012 at 1:32 AM
အစ်မခရီးသွားနေလို့ အခုမှ တစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်ဆုတောင်းပေးရတာကို ခွင့်လွှတ်ပါ..
မြတ်ကြည်လေးရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်ခရီးလေးကနေ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီထက့်ပိုလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ..
T July 22, 2012 at 3:48 PM
http://www.thanakharmay.com/ မှာ ရေးနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပါတ်သက်လို့ VOA မြန်မာပိုင်ရဲ့ ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှမှာ အစီအစဉ်လုပ် တင်ပြချင်ပါတယ်၊ အဓိကတော့ မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားမဲ့အကြောင်းတွေ၊ ဗဟုသုဖြစ်စရာတွေကို ရေးနေတဲ့အကြောင်းတွေကို ပြောပြစေချင်တာပါ၊ ကြိုတင်အသံသွင်းမဲ့ အစီအစဉ်အတွက် ပြောပြနိုင်မယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်ချင်ပါတယ်၊ ဆက်သွယ်နိုင်မဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အချိန်ကို သိပါရစေ၊ အမြန်ဆုံး အကြောင်းပြန်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်၊
Blogger တွေပြောသမျှ အစီအစဉ်မှုး
မြတ်ကြည် July 22, 2012 at 7:12 PM
I am really surprised and freaked out. Thank you so much and I do really appreciate for your contact. Yes, absolutely. My number is +8210 92365119. here is my mail address myatkyi1988@gmail.com. Then we can set the time.
သုံးထပ်သားကင် နဲ့ ထမင်းသုပ် (must haves)
သွားတိုက်ဆေး နဲ့ ဘာလုပ်လို့ရပါသလဲ?
Magenta Waves ( Nail Tutorial)